बेंगलोर ब्यस्त, मैसुर मस्त | अमेत्य
साँझमा कर्नाटक र तमिलनाडु छुट्टाउने नदि(नाम बिर्सें) लाई अंगालो मार्दै बनाइएको व्रिन्दावन गार्डेन पुग्दा यस्तो महसुस भयो कि एक छुट्टै संसारमा पुगिदै छ, हामीले कल्पनामा देख्ने गरे जस्तो । ( साँझको समयमा भान पनि पर्न सकेको हुन सक्छ )
यसरी कलमसँग पछि मित्रता गाँसिएला भन्ने त्यतिखेरै थाहा भैदेको भए त कुरै अर्को हुन्थो होला, तर के गर्ने यसरी भोलिको आज नै थाहा हुने भए भोलिले भोलि कहिले नि देख्न पाउन्न थ्यो होला ?
व्रिन्दावनको सांगितिक फोहरा एक मात्र प्रमुख आकर्षणको केन्द्र हो जहाँ संगीतको तालसँगै पानीको फोहरालाई नचाइन्छ । संगीतको मजालाई होहल्लासँगै नाचेर लिन खोज्दा साथी कमलले त भेट्यो नै (खुट्टामा)साथै संजयले पनि झन्डै झन्डै -लट्ठी, त्यहाँको सुरक्षाकर्मीको । बिना कुनै हल्लाखल्ला शान्त तरिकाले सांगितिक फोहराको मजा लिनुपर्ने कुरो चित्तबुझ्दो त थिएन तर विकल्प पनि त केही थिएन । तर संजयको expression चै गज्जबको थियो, हातमा लट्ठी लिएको सुरक्षाकर्मी देखेर पनि नबुझी तर्सिएको expression ।
यस्तो मस्त मैसुरको मस्तीपछि उटपट्याङ उटिमा हाछँयु गर्न हानियौं उटि-एक दिन भेटी चढाउन । काठमाडौं ओहोरदोहोर गरेका साथीहरु उटी उकालो लाग्दा देखिएको तलको दृश्य बकबास भन्दै थिए-आफु त बिराटनगर छाडी कही गइएकै थिइएन(अझै छैन)-रमाइलै लाग्यो । उटिको botanical garden प्रंशसा गर्न लायकको थियो ।
अगिदेखी पर्खेर बसेको बेंगलोरले बल्ल मैसुर र उटिपछी हामीलाई धित मरुन्जेल देख्न पायो तर यसको ठीक(गतिलो) ठाउँमै नबसेर हो शायद, अलि कस्तो , खस्रो खस्रो लाग्यो बेंगलुरु । ‘सिलिकन सिटी’ को नामले चर्चित यस शहरमा पुगेर technological museum छुटाउने त कुरै भएन, त्यसमा पनि engineering का बिद्यार्थीले । पाइपको नामो निशानै नरहेको मात्र टुटिबाट पानी झरिरहेको धारा एक किसिमले ‘यस्तो कसरी हुन्छ’ भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरिरहेको थियो तर उत्तर कहाँबाट ल्याउने ? उत्तर अझै अस्पष्ट छ ।
गाइको मासु निस्फ्रिक तरिकाले पाइने र फुटेका ढलमा कसैको ध्यान नजाने ठाउँमा बसिएर हो शायद, अस्तब्यस्त लागेको बेंगलोर M.G. Road सम्म आइपुग्दा निकै ब्यस्त र ब्यवस्थित लागिरहेको थियो ।